Goobaha Kubada Cagta ee Avvy Online - Codes-ka Bustaha Online-ka ah
Casino Online Xeerarka Bonus > Goobaha Kubadda Cagta ee Australiya Online
(499 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Loading ... Khamaarista Austria waa mid sharci ah. Intaa waxaa dheer, sannado badan waxay ku jirtay khamaar dhaqaale ee dalka. Dhammaan noocyada khamaarka ee Austria waxaa sameeya Wasaaradda Maaliyadda (Bundesministerium für Finanzen). Maanta, waxaa jira khadadka casuun ee 12. Booqdayaasha waxaa la siiyaa ciyaaro kala duwan, oo ay ku jiraan roulette, poker, blackjack, mishiinnada kabaha leh jackpot iyo horumarinta kale ee khamaarka.
Xarunta ugu caansan ee khamaarka ee Austria waa Casino, oo ku taal dhismaha Hotel Grand Hotel de l'Europe. Hotelka laftiisa waxaa lagu dhisay 1907, iyo guriga khamaarka markii uu u furay dadweynaha tan iyo 1984 oo leh aag mitir oo labajibbaaran oo 600 ah. Tan iyo markii Austria ay tahay meel caan ah oo dalxiisayaal ah, casinos badanaa waxaa lagu dhisay hareeraha hoteelada. Xasuuso in guryaha cayaaraha ee dalkan ayan shaqayn saacad kasta. Waxay u furan yihiin martida ka socota 18: 00 ama 19: 00.
Khamaarka internetku wuxuu leeyahay taariikh aad u dheer waddankan. Qaar ka mid ah boggaga internetka ee khamaarka ee Austria ayaa ka mid ah kuwa ugu faa'iidada badan, inkastoo xarumahooda ay ku yaalaan dhulka dalka, sida jasiiradaha Channel. Fiiri boggaga internetka ee Austrianka Bvin (Bwin), oo rukhsad u haysta dalal badan adduunka oo dhan.
Sharciyada khamaarka internetka ee Austria ayaa sidoo kale kuu oggolaanaya inaad ku siiso liisamada shirkadaha kale ee dalka ku yaala, ujeedada taas oo ah - soo bandhigida cinwaanada internetka ee khamaarka cusub. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira hal xaalad - bogagga internetka waxaa kaliya oo ay sameeyaan qamaarayaasha gudaha. Isla mar ahaantaana ma jiraan wax xaddidan oo ku saabsan arrinka cayaarta ee portals caalami ah, Awstaria iyo dadka ayaa si xor ah u adeegsan kara adeegyo goobaha ajnabiga ah
Waxaad eegtaa liiska goobaha qadka casriga ah ee aqbalaya ciyaartoyda Austria, oo bixiya cayaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa waxyaabo badan oo madadaalo ah oo ka imanaya mashiinnada moobiilka si loo ciyaaro casriyeynta oo ka soo jeeda kuwa sida caanka ah ee caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novolin, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan. Waxaad sidoo kale akhrin kartaa boggayaga internetka ee casino, si aad u ogaatid dallacaadyada ugu fiican, gunnooyinka iyo fursadaha lacag bixinta ee laga heli karo ciyaartoyda Austria.
Alps Snowflakes, haraha berrito iyo mozartkugel nacnac leh marzipan leh - dhammaanteed iyo wax badan oo dheeraad ah ayaa ah muujinta Austria. Taas oo ah waddankan CasinoToplists maanta ayaa kula soo booqanaya si aad u hesho naadiyada casinos iyo naadiyada ciyaaraha.
Austria - casinos iyo khamaar ee waddankan:
Dawladda Federaalka ah iyo joogtaynta Jamhuuriyadda Baarlamaanka waa magaca rasmiga ah ee Jamhuuriyadda Austria. Tilmaamaha ugu horreeya ee taariikhda laga soo bilaabo sannadka 996 AD Austria waxay ku taal bartamaha Europe. Taariikhda waddanku waxay si aad ah ugu xiran tahay gobolka Jarmalka ee gobolka Bavaria - kaliya ee 1156, jimcaha ayaa madaxbannaanaa. Hal mar dalka gudihiisa waxaa lagu lifaaqay Czech Republic, Croatia iyo Hungary, marka lagu daro aad u adag in xiriir la yeesho Turkey , Faransiiska iyo Dabcan Germany . Caasimadda dalka waa magaalada Vienna. Kadib dhammaadkii dagaalkii adduunka labaad ee Austria sida Germany wuxuu u qaybsanaa 4.
Liisanka ugu horreeya ee dhismaha casino waxaa laga soo saaray 1922, oo aasaaskii ugu horreeyay ee khamaarka lagu daabacay Salzburg. Tan iyo markaas ka dib, biyo badani way daadsan yihiin, laakiin hal shay ayaa isku mid ah - casaan ku yaal Austria ayaa loo ogol yahay. Ururka ugu weyn ee "Casinos Austria", wuxuu ka shaqeeyaa casuunyo 12 waxaana ka mid ah ururada kale iyada oo la raacayo mabda'a haynta.
Sidaa shirkadda "Casinos Austria International" waxaa loo yaqaanaa meel ka baxsan xudduudaha dalalkooda: waxay leedahay laanta 15 oo hadda waxay ku hoos jirtaa casuumada 57. Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay samaysay qaybo badan oo ganacsi khamaar leh: maraakiib ku leh casinos on board. Nambarkoodu si dhakhso ah ayuu ula socdaa calaamadda 100.
Bad Gastein - xaafad koonfurta Salzburg ah
Magaaladan waxaa ka mid ah casinooyinka ugu casrisan ee ma aha oo kaliya Austria, laakiin sidoo kale guud ahaan Yurub. Waxay ku taal dhismaha Grand Hotel de l'Europe, oo la dhisay qarnigii 21 aad. Caadi ahaan waxay ku shaqeeyaan casino casri buuxa oo laga bilaabo 19: 00, iyo dhammaan kuwa doonaya inay soo booqdaan waa lagama maarmaan in la fiiriyo xeerka lebiska - suudhiska cayaaraha iyo gaabanaanta halkan lama soo dhaweynayo. Adiguna waxaad u baahan tahay inaad haysato dukumeenti aqoonsi. Waxa ugu muhimsan - joogitaanka sawiradaada, iyo da'da ka weyn sanadaha 18. Tikidka gawaarida wuxuu ku baxayaa 23 euros, waxaad u heli kartaa nambarada euro 25.
Magaaladan, casino "Casino Salzburg" waxay ku taallaa garoonkan ee Schloss Klessheim, oo lagu dhisay maskaxda rokoko style minding, taas oo nafteeda soo jiidashada. Meeshani ma aha oo kaliya in la helo muuqaalka toogasho. Gaaritaanka casino la bixiyay, qiimaarku wuxuu ku xiran yahay waqtiga iyo dhacdooyinka ka dhaca guriga. Waxay noqon kartaa jimicsiyada bandhigyada ama heesayaasha.
Magaaladda Velden ayaa sidoo kale caanka ku ah casinos, oo lagu dhisay 1950. Laakiin tan iyo markii ay doonayaan inay ku qabtaan badhida Fortune sannad kasta, waxay noqotaa wax badan, dhismaha casino waa la ballaariyay. Dhismaha cusub, oo laga furay 1989, wuxuu awoodaa inuu qaato booqdayaasha 4,000 waana mid aan fiicnayn. Waxaa jira makhaayad, bistro, bar, iyo barxada banaanka-bannaan oo ka baxsan harada weyn. Waa mid ka mid ah midka ugu casrisan ee casinos ee Europe.
Opera Vienna. Goobta: Vienna, Opernring, 2. Austria waxay ku faani kartaa majaajilada muusikada - Mozart, sidaas awgeed booqashada "Opera Vienna" waa qasab in lagu daro liiska bandhigyada khasabka ah;
Hundertwasser House. Goobta: Vienna, Untere Weissgerberstrasse, 13. Cinwaankan waxaad ka heli doontaa mid ka mid ah dhismooyinka ugu darajada badan ee Austria.
Museum of Sigmund Freud. Goobta: Vienna, Berggasse, 19. U hubso inaad booqato matxafka aqoonyahan caanka ah. Halkaasna waxaa laguu sheegi doonaa oo keliya nolosha laakiin sidoo kale waxqabadka cilminafsiyeedka. Dhismaha jimicsiga maskaxda ee weyn ayaa ku noolaa ku dhowaad 47.
Vienna Woods. Goobta: Vienna, Wienerwald. Daalinta jidadka mashquulka ah ee Vienna, waxaad had iyo jeer ku raaxeysan kartaa beerta weyn ee magaalada.
Museum "Taariikhda Farshaxanka". Cinwaanka: Booqashada 5. Halkan waxaad arkaysaa sawirada asalka ah ee ay ka mid yihiin Titian, Raphael, Vermeer iyo qorayaal kale, iyo sidoo kale sculptures iyo farshaxanno kala duwan.
Sababtoo ah midka la midka ah magacyada, badanaa wuu wareeray Austria oo leh Australia. Sidaa daraadeed, waa farshaxan aad u caan ah "Awstar: ma jiraan kangaroos";
Lake Gruner waxay hareereysaa jardiinada dhabta ah - xilliga qaboobaha miisaanka 1-2 oo keliya, laakiin ka dib daadadka qulqulaya biyaha ayaa noqda mitirka 12;
3.1.1.1 Bad Gastein - xaafad koonfurta Salzburg ah